Guddi dhogorta dhagaxa ah ee gacanta lagu sameeyey waxay leedahay dusha quruxda badan, dahaarka dhawaaqa, dahaarka kulaylka, ilaalinta kulaylka, iska caabbinta dhulgariirka iyo waxqabadka iska caabbinta dabka
Daahirinta dhogorta dhagaxa ah guddi wuxuu u qaybsan yahay laba nooc: dhogor dhagaxa oo mashiin lagu sameeyey guddi iyo dhogor dhagaxa gacanta lagu sameeyey guddi. Waxaa ka mid ah, dhogor dhagaxa gacanta lagu sameeyayguddi waxaa loo qaybiyaa dhogor dhagaxa dhagaxa ah oo gacanta lagu sameeyay guddi, hal MgO dhogor dhagax gacmeed guddi oo labanlaaban MgO dhogor dhagax gacmeed guddi. Daahirinta dhogorta dhagaxaguddi iyo habka wax -soo -saarkiisu waa ikhtiraacyo horumarsan ilaa hadda. Suufka dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyayguddi wuxuu isticmaalaa dhogor dhagaxa dabka u adkaysan kara oo ah waxyaabaha udub dhexaadka u ah waxaana lagu daraa xariijin wax soo saar oo joogto ah oo hawlo badan leh. Suufka dhagaxa ee gacanta lagu sameeyayguddi waxaa laga sameeyaa taariko bir ah oo laba dhinac leh oo mashiinka lagu farsameeyo iyo suumanka birta ku wareegsan (iyada oo loo marayo suumanka birta ee ku xeeran si kor loogu qaado iska caabinta foorarsiga), ka dibna lagu daro xoqidda gacanta iyo agabka macmalka ah ee macmalka ah. Daahirinta dhogorta dhagaxa ahguddi buuxiyo shuruudaha dhisidda dahaarka kuleylka, dahaarka dhawaaqa, ka -hortagga dabka, iwm, wuxuuna gaaraa yoolalka tayada sare leh, sahlanaanta iyo badbaadada.
Guddida daahirinta dhogorta dhagaxu waxay u qaybsantaa laba nooc
dhogor dhagaxa oo mashiin lagu sameeyey guddi iyo dhogor dhagaxa gacanta lagu sameeyey guddi. Waxaa ka mid ah, dhogor dhagaxa gacanta lagu sameeyayguddi waxaa loo qaybiyaa dhogor dhagaxa dhagaxa ah oo gacanta lagu sameeyay guddi, hal galaas oo magnesium ah oo dhogor dhagaxa ka samaysan guddi iyo galaas labanlaab ah oo dhogor dhagaxa manhajka ah guddi. Daahirinta dhogorta dhagaxaguddi iyo habka wax -soo -saarkiisu waa ikhtiraacyo horumarsan ilaa hadda. Suufka dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyayguddi wuxuu isticmaalaa dhogor dhagaxa dabka u adkaysan kara oo ah waxyaabaha udub dhexaadka u ah waxaana lagu daraa xariijin wax soo saar oo joogto ah oo hawlo badan leh. Suufka dhagaxa ee gacanta lagu sameeyayguddi waxaa laga sameeyaa taariko bir ah oo laba dhinac leh oo mashiinka lagu farsameeyo iyo suumanka birta ku wareegsan (iyada oo loo marayo suumanka birta ku wareegsan si kor loogu qaado iska caabinta foorarsiga), ka dibna la isku daro xoqidda gacanta iyo agabyada muhiimka ah ee flocculent macmal ah. Daahirinta dhogorta dhagaxa ahguddi buuxiyo shuruudaha dhisidda dahaarka kuleylka, dahaarka dhawaaqa, ka -hortagga dabka, iwm, wuxuuna gaaraa yoolalka tayada sare leh, sahlanaanta iyo badbaadada.
dhogor dhagaxa oo mashiin lagu sameeyey guddi iyo dhogor dhagaxa gacanta lagu sameeyey guddi. Waxaa ka mid ah, dhogor dhagaxa gacanta lagu sameeyayguddi waxaa loo qaybiyaa dhogor dhagaxa dhagaxa ah oo gacanta lagu sameeyay guddi, hal MgO dhogor dhagax gacmeed guddi oo labanlaaban MgO dhogor dhagax gacmeed guddi. Daahirinta dhogorta dhagaxaguddi iyo habka wax -soo -saarkiisu waa ikhtiraacyo horumarsan ilaa hadda. Suufka dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyayguddi wuxuu isticmaalaa dhogor dhagaxa dabka u adkaysan kara oo ah waxyaabaha udub dhexaadka u ah waxaana lagu daraa xariijin wax soo saar oo joogto ah oo hawlo badan leh. Suufka dhagaxa ee gacanta lagu sameeyayguddi waxaa laga sameeyaa taariko bir ah oo laba dhinac leh oo mashiinka lagu farsameeyo iyo suumanka birta ku wareegsan (iyada oo loo marayo suumanka birta ee ku xeeran si kor loogu qaado iska caabinta foorarsiga), ka dibna lagu daro xoqidda gacanta iyo agabka macmalka ah ee macmalka ah. Daahirinta dhogorta dhagaxa ahguddi buuxiyo shuruudaha dhisidda dahaarka kuleylka, dahaarka dhawaaqa, ka -hortagga dabka, iwm, wuxuuna gaaraa yoolalka tayada sare leh, sahlanaanta iyo badbaadada.
Hore: Buugga qolka nadiifinta MgO oo laba-dhinac leh
Xiga: Gacan -gacmeed godan MgO guddi qolka nadiifta ah
Gacan -ku -samaynta Mos Guddi Qol Nadiif ah
Gacan -ku -samayska dhogorta dhagaxa ah ee Nadiifinta ah
Gacan -ku -samayska Dhogorta Nadiifka ah ee Nadiifinta Qolka Nadiifinta Gacan -ku -samayska ah Mgo Guddi Qol Nadiif ah
Guddi qolka nadiifinta dhogor dhagaxa ah oo mashiinka lagu sameeyey
Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Qolka Nadiifka ah, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka, Daaqadda Qolka nadiifka ah, Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub,